भोट किन्नेहरुलाई एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा उठने नैतिकता छैन
सुनिल मणी दाहाल अमेरिका
मेरा एक अत्यन्त आत्मिय मित्रले बडो हर्षका साथ भने 'यार, यसपाली एनआरएनको सदस्य हुन एक डलर पनि खर्च लागेन, घरका चार जनाको परिवार झ्याप्पै सदस्य भए।' मलाई ती मित्रको भनाईबाट कुनै आश्चर्य भएन। एनआरएन अमेरिकामा अध्यक्षका प्रत्याशीहरुले पहिलेको कार्यकालमा पनि सदस्यहरु किनेको कुरा मैले सुनेको थिए। यसै प्रकरणमा निवर्तमान अध्यक्ष डा केशव पौडेल मुछिए, मुद्दा मामिलामा ऐले सम्म जाकिएका छ्न।
मलाई आश्चर्य लाग्यो जावो १५ डलरका लागी मेरो आफ्नै मित्र कसैको झोला बोक्न तयार भएको देखेर। मेरो लगौट्या साथी भएकाले मैले जती गाली गरे पनि माईन्ड गर्दैनन भन्ने कुरामा म ठुक्क थिए। उनलाई सोधे 'कसरी सित्तैमा सदस्य भयौ यार?' उनले खुलेर भन्न रुचाएनन। उनले केहि कुराहरु एकदम होसियारीका साथ चपाएर जानकारी गराए। उनको यो नयाँ अवतार देखेर भने म चकित परे।
सानो उमेर देखी नै सोच बिचार गरेर ठिक्क खर्च गर्ने बानी उनको थियो। मेरो भने ठीक उल्टो बानी थियो, मूड भयो की जे जती पैसा छ, भरे बेलुका खर्च गरी हाल्थे। बाटो घाटो कही पनि गरीब, दुखी , असहायहरु देख्यो की सम्झनुस मेरो गोजी रित्तीनथ्यो। परिवारको ख्याल गर यार, भोली केटा केटीको स्कुलको फी तिर्ने दिन हो भनेर उसले मलाई सम्झाउथ्यो। हामी दुबै मित्रले आफ्नै पौरखले हैसियत अनुसारको जिवन निर्वाह गर्दै आएका थियौ।
तर, कमाईको हिसावले म भन्दा उनी धेरै कमजोर थिए। अन्तरराष्ट्रीय सस्थामा जागिर खान्थे, उनी एउटा निजी कम्पनीमा एकाउन्टेन्ट थिए। करीव पाच बर्ष अगाडी उनी आफ्नो परिवार सहित अमेरिका आए। केहि महिना भर्जिनियामा बसी उनी परिवार सहित अर्कै राज्यमा बसाई सरे। अमेरिका आए पस्चात नयाँ भएका कारण निरन्तर रुपमा उनी म सँग सम्पर्क गर्थे, सर सल्लाह लिने गर्दथे। हामी बिच दुख र शुखका कथाहरु साटा साट हुन्थे।
आज, तीनै मेरा आत्मिय मित्र १५ डलरमा बिक्री भएको सुनेर मेरो आत्मा रोएको थिए।
उनको कुरा गराईबाट मलाई थप तनाव भयो। म उनी तर्फ कटकीए 'यार, तिमीले जावो १५ डलर तिर्न सकेनौ? १५ डलरमा तिमीले आफ्नो ईमान र धर्मलाई लिलामी गरेउ? तिमीले त्यस्तो निर्णय लिनु पूर्व एक पटक पनि मलाई सम्झेनौ? छोरा छोरी र परिवारले सोधे भने के जवाफ दिन्छौ?
सात दिन पस्चात फेरी उनको फोन आयो 'सरी यार्, बुझ्दै नबुझी गल्ती गरीएछ। आफु बसोबास गरेको अपार्टमेन्टका सबै नेपालीहरु लाई निशुल्क सदस्य बनाईएकोले त्यही हुलमुलमा आफु र आफ्नो परिवार समेत निशुल्क सदस्य बन्न पुगेको ब्यहोरा बताए। एनआरएन अमेरिका भित्र यती ठुलो माफिया रहेछ्न भन्ने सामान्य हेक्का गर्न नसक्नु मेरो कमजोरी रहेछ, उनले आफ्नो गल्तीमा लज्जावोध भएको बताए।
उनी आज कुरा नचपाई बोल्ने मुडमा थिए। सात दिन अगाडी उनीसँगको मेरो बार्तालापले उनमा केहि सकारात्मक असर पारेको प्रष्ट महसुस हुन्थ्यो। उनले यसै प्रसङमा थप जानकारी संकलन गरेका रहेछ्न। उनले जानकारी पाए अनुसार भने 'टेक्सास राज्यमा करीब ७५ प्रतिशत जती भोटहरु एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्षका प्रत्यासीहरुबाट किनिएका छन। यसरी आफ्नो पैसा खर्च गरेर सदस्य बनाउनेहरुमा कुनै पनि प्रत्यासीहरु अछुतो छैनन।
उनले थप जानकारी दिदै भने 'टेक्सास स्थित एउटा ठुलो कम्पनीमा रहेका चार सय भन्दा बढी नेपालीहरुका परिवारहरुलाई समेत निशुल्क सदस्य बनाईएको छ। त्यस्तै, नेपालीहरु बसोवास गर्ने अपार्टमेन्टहरुमा सम्बंध बनाई सबैलाई निशुल्क सदस्य बनाईएको छ। यसरी सदस्य बनाउनका लागी आआफ्नो लगानी भएको तथा आफ्ना ब्यापारीक पार्टनर तथा शुभचिन्तकहरुको ब्यापारिक सस्थालाई प्रयोग गरी उनीहरु मार्फत प्रत्येक नेपालीहरुको परिवार सहितको नामावली लिस्ट लिएर सदस्य बनाएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसरि सदस्य बनाउनका लागी आफ्नो ब्यापारिक कारोवार सँग सम्वन्धित चेकरक्रेडिट कार्डको प्रयोग नगरी वालमार्ट तथा अन्य स्टोरका कार्डहरुको प्रयोग गरीएको जानकारीमा आएको ब्यहोरा उनले थप जानकारी दिदै भने।
जसरी टेक्सासमा सदस्यहरु किनियो, त्यही रुपले न्यूयोर्क लगायतका अन्य राज्यहरुमा समेत अध्यक्षका अरु प्रत्याशीहरुले सदस्यहरु किनेको चर्चा छ। हुन त सदस्यता छानविन कमिटी बनाई त्यस्ता सदस्यहरु उपरको छानविन पनि गरीएकै हो, तर त्यो छानविन अपूर्ण रहेको बताईन्छ।
बर्तमान एनआरएन अमेरिकाका एक पदाधिकारी भन्छ्न ( निवर्तमान अध्यक्षको अनुकुल हुने गरी प्रत्याशी गौरी जोशीको पकड भएको क्षेत्र टेक्सास राज्यमा मात्र छानविन गरियो र बाईस सय जती सदस्यहरु हटाईए, त्यही रुपले अनैतिक सदस्य बनाईएका न्यूयोर्क लगायत अन्य राज्यहरुमा किन छानविन गरीएन। यस प्रकार, अध्यक्षका प्रत्यासीहरुले आफ्नो पक्षमा सदस्यहरु बटुल्न गरेको अनैतिक आर्थीक प्रतिस्पर्धा र होडबाजीले अमेरिकाका नेपाली समाजको शिर झुकेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको आगामी कार्यकालका लागी हुने निर्बाचन ११ र १२ अगस्टमा हुँदैछ। निर्वाचनमा गुट उपगुट सहितको चरम बिवादका साथै अध्यक्षका प्रत्यासीहरुको अनैतिक कृयाकलाकले यस सस्थाको साख झनै गिरेको छ। अमेरिकाका नेपाली भाषीहरुको हक र हितका लागी बिबिध सामाजिक कार्य संचालन गर्ने प्रमूख उदेश्यका साथ स्थापना गरिएको एउटा सस्थालाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी ग्रान्ड डिजाईनका साथ सस्थालाई कब्जा गर्नेहरुको समूह लागी परेको तथ्य सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ।
सामाजिक कार्य भनेको के हो, किन, कसरी र कस्का लागी गरिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएका झुन्डहरुको दबदबा रहेको एनआरएन अमेरिकामा नव भलादमीहरुले समेत त्यही गलत कृयाकलापहरुलाई अनुकरण गर्दा एनआरएन अमेरिकाको अस्तिव आज संकटमा परेको छ।
सदस्यता नामावली हेर्ने हो भने यस सस्थामा बिज्ञ तथा बुद्दिजिवीहरुले अलिकती पनि रुची देखाएको पाईदैन। जोश र जागर बोकेका यूवाहरु एनआरएनको नाम सुन्ने बित्तिकै चार कोश टाढा भाग्ने गरेका छन। जे जती यूवाहरु सदस्य भएका छन, बिभिन्न राज्यहरुमा बुथ खडा गरी अधिकांसको भोट किनीएको छ। यसै सन्दर्भमा एनआरएन अमेरिकालाई नजिकबाट अनुगमन गरी रहेका एक मित्र भन्छ्न 'यस प्रकारको बेथितीले गर्दा प्रमाणित सदस्य १४ हजार मध्ये ७/८ हजार सदस्यहरु त किनेर नै बनाएको हुन सक्ने अनुमान गरिदै छ। यस अवस्थामा कूल नेपालीहरुको करीब ५ प्रतिशत मात्र एनआरएन अमेरिकामा सदस्य रहेको ठानीएकोमा किनिएका सदस्यहरुलाई हटाउदा यो संख्या घटेर अढाई प्रतिशत मात्र हुन सक्ने देखीएको छ।
यती भनी रहदा, आज मलाई लज्जावोध भएको छ। एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा आखिर के छ? समाज सेवाको खोल भित्रको राजनिति र त्यसमा विराजमान हुने तिव्र आकांक्षाका लागी अध्यक्ष पदका प्रमुख प्रत्याशीहरूले विभिन्न राज्यहरूमा वुथ खडा गरी प्रति व्यक्ति १५ डलरको सदस्यता शुल्क तिरी सिड्गै परिवारको भोट किनेकोमा नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन?
एनआरएन अमेरिकाको आगामी कार्यकालका लागी हुने निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी सबैलाई अनुरोध छ (आफ्नो अनुहारलाई एक पटक ऐनामा हेर्नु होस्, एक छिन सोच्नु होस, छातीमा हात राखेर भन्नु होस) के यसरी नै समाज सेवा गरीन्छरु भोट किनेर बनाएका सदस्यहरुको भोटले अध्यक्ष भएर अमेरिकाका हामी जस्ता नेपाली भाषीहरु बिच कुन अनुहार लिएर आउनु हुन्छरु अलिकती पनि नैतिकता बचेको भए यस निर्वाचनबाट सबै हटनुहोस्।
साधारण सभा बोलाएर बिधानलाई अमेरिकाका नेपालीहरुको हित अनुकुल हुने गरी संसोधन गर्ने हिम्मत गर्नु होस, तपाईले किनेका सदस्यहरुलाई खारेज गरी फोटो आइडी सहितका सदस्यहरु बनाउनु होस। तपाई हामी सबैको साझा चौतारी बनोस एनआरएन अमेरिका।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ११, २०७४, ११:०५:४०